2010-10-31 ~ Myanmar Express
ထူးဆန်းသော အတိုက်အခံများ (၃)
နိုင်ငံရေးသမားနှစ်မျိုးရှိသည် =>(၁) နိုင်ငံနှင့်လူမျိုးအတွက် မိမိ၏ စဉ်းစားတွေခေါ်နိုင်မှု၊ လက်ရုံးရည်နှင့် နှလုံးရည်၊ ငွေကြေး၊ အာဏာ တို့ကို ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူ နိုင်ငံရေးသမားများ(၂) ငွေကြေး၊ အာဏာ နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်အတွက် နိုင်ငံနှင့် လူမျိုးကို ရင်းနှီးမြုပ်နှံ ခုတုံးလုပ်သူ အတိုက်အခံများငွေကြေး၊ အာဏာ နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်အတွက် နိုင်ငံနှင့် လူမျိုးကို ရင်းနှီးမြုပ်နှံ ခုတုံးလုပ်သူ အတိုက်အခံ နှစ်မျိုး =>(၁) ဒေါ်လာစားအတိုက်အခံများ(၂) ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စားအတိုက်အခံများဒေါ်လာစားအတိုက်အခံနှစ်မျိုး =>(၁) ပြည်တွင်းကြေးစားအတိုက်အခံ(၂) ပြည်ပဒေါ်လာစားအတိုက်အခံပြည်ပဒေါ်လာစားအတိုက်အခံ (၇) မျိုး =>(၁) အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ပြည်တွင်းကို ဝင်ရောက်ခွင့်မရှိတော့သဖြင့် လက်ရှိအစိုးရ မရှိမှ ပြည်တွင်းသို့ ဝင်ရောက်နိုင်မည်ဟု တွေးမိသောကြောင့် လက်ရှိအစိုးရ ဘာလုပ်လုပ် ကန့်ကွက်မည့်သူများ။(၂) ဘာသာရေးလွမ်းမိုးလိုသည့် ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်သည့် အခြားဘာသာဝင်များ(၃) လူမျိုးရေးသြောဇာလွမ်းမိုးလိုသည် ဗမာ မဟုတ်သည့် တိုင်းရင်သားများနှင့် ကပြား များ(၄) အရူးနှစ်မျိုး (စိတ်ဖောက်ပြန်ပြီးရူးနေသူများနှင့် ဦးနှောက် ကျပ်မပြည်၍ ရူးနေသူများ)(၅) မွတ်စလင်ကုလားများ၊(၆) အစွန်းရောက်သူများ၊(၇) မြန်မာစာ၊ မြန်မာစကား၊ မြန်မာ့သမိုင်းနှင့် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးအကြောင်း အသေအချာမသိ၊ မတတ်သူများပြည်ပဒေါ်လာစားအတိုက်အခံတို့၏ အလုပ်အကိုင်များ(၁) တစ်ကမ္ဘာလုံး ရုံးပိတ်သည့် အထင်ကရနေ့များတွင် ထိုနေ့ကိုအကြောင်းပြု၍ သံရုံးရှေ့တွင် အချင်းချင်းအဆိုတင်သွင်း၊ အချင်းချင်းထောက်ခံအတည်ပြုကာ အချင်းချင်းအားပေးလက်ခုတ်တီးကြခြင်း။(၂) မြန်မာအစိုးရ၏ တစ်ခုခု ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် ပြုလုပ်ချက်များကို အကြောင်းပြချက်မရှိ ကန့်ကွက်ပွဲကျင်းပကြခြင်း(၃) ကိုယ့်နိုင်ငံမှ အနုပညာရှင်များလာပါက ကန့်ကွက်ကြခြင်း(၄) အစိုးရမကောင်းသတင်း အမျိုးမျိုးလုပ်ကြံလွှင့်ခြင်းနှင့် ဘလော့ရေးခြင်း(၅) မြန်မာပြည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်အတွက်မျှ အကျိုးမရှိသော၊ မြန်မာနိုင်ငံကို အရှက်ရစေသော အဆင့်တန်းမဲ့ အောက်ပါ လုပ်ဆောင်ချက်များ ပြုလုပ်ကြခြင်း(၆) အထက်ပါ လုပ်ဆောင်ချက်များအားလုံးဖြင့် လုပ်ကွက်ပြကာ နိုင်ငံခြားမှ အထောက်ပံ့များကို ညာစားခြင်းမြန်မာနိုင်ငံကြီး ဒီမိုကရေစီ အမြန်ရဖို့နှင့် ကမ္ဘာ့အလည်မှာ ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစွာ လက်မထောင်နိုင်ဖို့ ဒေါ်လာစားအတိုက်အခံတို့ သမိုင်းတင်မည့် အလုပ်ကြီးအကိုင်ကြီးတွေ လုပ်နေကြပါတယ်။ဖြဲပြန်ပြီ ရှို့ပြန်ပြီ (အဟောင်းပြီးတော့ အသစ်)ဒီမိုကရေစီရဖို့ပါ ကျွန်တော်အရူးမဟုတ်ပါ (အမည်-ဦးထိန်လင်း၊ BDC အဖွဲ့ UK ၏ ဒုတိယ ခေါင်းဆောင်)အာရုံစိုက်နေတုန်း ငါကိုင်တာ မိုက်ခရိုဖုန်းဘာလုပ်နေလဲ ဘာအတွက်လဲဆိုတာ ဘယ်သူမှနားမလည်နိုင်ပဆိုးမနိုင် ပဝါမနိုင်အလာကယ်ပါ၊ အပြန်ကယ်ပါ၊ ကြုံရင်ကြုံသလို ကယ်ပါဒီမိုကရေစီရဖို့မွတ်စလင် ကုလားမကလည်း အလံကို ချနင်းကုလားမိုးသီးကလည်း ဒေါ်လာတောင်းလိုက် ပျော်ပါးလိုက် Myanmar Express
မိခင်ကျောင်းတော် (Alma Mata) ဖြစ်တဲ့ မန္တလေးလဖုန်းအထိမ်းအမှတ် အထက်တန်းကျောင်းက ကျောင်းသားဟောင်း သုံးယောက် ရောက်လာပြီး နှစ်စဉ် ကျင်းပနေကျ ဆရာကန်တော့ပွဲကို ဇန်နဝါရီလထဲမှာ ကျင်းပမယ့် အကြောင်း အသိပေးကြတယ်။ငယ်မူငယ်သွေးပြန်ကြရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ စီနီယာ ကျောင်းသားဟောင်းကြီးတွေ လာဖြစ်အောင် လာဖို့လည်း တိုက်တွန်းပေးပါဦးလို့ ပြောကြတယ်။ အသက်ခြောက်ဆယ်ကျော် ခုနစ်ဆယ်ကျော်ကြီးတွေ ပြန်ဆုံတွေ့ကြတဲ့အခါ ငယ်မူငယ်သွေးတွေ ပြန်ပြီး တယောက်နဲ့ တယောက် စကြနောက်ကြ ငယ်ကျိုးငယ်နာတွေဖော်ကြ လုပ်တာတွေကြည့်ပြီး ကြည်နူးရလွန်းလို့ပါလို့လည်း ပြောကြတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ ငယ်ပေါင်းတွေ ဆုံတဲ့အခါ ဘယ်သူမဆို ပျော်ကြတာပါပဲ။ ရန်ကုန်မှာနေကြတဲ့ အတန်းတူ သူငယ်ချင်း သုံးလေးယောက်ဆုံပြီး တခါတလေ လာကြတဲ့အခါ အားလုံး ဝမ်းသာပျော်ရွှင်ကြတယ်။ ဒီအသက် ဒီအရွယ်မှာ ကိုယ့်ကို မင်းနဲ့ငါနဲ့ ပြောသံကြားရတာလောက် ပီတိဖြစ်ရတာ ဘာမှမရှိပါဘူး။ အင်မတန် ကြည်နူးစရာ ကောင်းတယ်။အန်ကယ်ကြီးနဲ့ ဘဘနာမည်ကို 'ဦး ကို မောင်' မပါဘဲ နာမည်အရင်းအတိုင်း ခေါ်သံမကြားရတာ နှစ်ပေါင်း လေးငါးဆယ်လောက် ရှိပြီဆိုတော့ ဒီလို အခေါ်ခံရတာ အင်မတန် ဝမ်းသာကျေနပ်ရတယ်။ အားလုံးအသက်တွေက ခုနစ်ဆယ်တန်းတွေဆိုတော့ အန်ကယ်ကြီးတို့၊ ဘဘတို့ဆိုတဲ့ ခေါ်သံတွေပဲ နေ့တိုင်း ကြားနေရတာ မဟုတ်လား။နောက်ပြီးတော့ ကိုယ့်ကို မင်းတလုံးငါတလုံးနဲ့ ပြောသံနားထောင်ရတာလည်း အင်မတန် အရသာရှိပါတယ်။ လဖုန်း ကျောင်းသားဟောင်းတွေထဲမှာ ကျွန်တော်တို့က ဒုတိယအကြီးဆုံး ကျောင်းသားဟောင်းကြီးတွေ ဖြစ်နေကြပြီလေ။ ကျွန်တော်တို့ထက် တတန်း ပိုရှေ့ရောက်တဲ့ ကျောင်းသားဟောင်းတွေက သုံး၊ လေးယောက်လောက်ပဲ ကျန်တော့တာကိုး။ ဒီတော့လည်း ဘဘ အခေါ်ခံရတာ သဘာဝကျပါတယ်။စာရေးဆရာဖြစ်ရတာ ကျေနပ်စရာကန်တော့ခံ ဆရာတွေထဲမှာလည်း ကျွန်တော်တို့ ကန်တော့ရမယ့် ဆရာဖြစ်ခဲ့သူဆိုလို့ ဆရာဦးမြသောင်း တယောက်တည်း ကျန်ပါတော့တယ်။ ဒါကြောင့် တွေ့ချင် ကန်တော့ချင်ပေမယ့် ကျန်းမာရေး မကောင်းသူဆိုတော့ တကြိမ်တခါမှ ကန်တော့ပွဲကိုအရောက်သွားပြီး မကန်တော့နိုင်ခဲ့ဘူး။ အဝေးကပဲ စိတ်နဲ့မှန်းပြီး ကန်တော့ရတယ်။ သွားနိုင်လာနိုင်တဲ့သူတွေကိုတော့ တိုက်တွန်း နှိုးဆော်ပေးပါတယ်။ ကျေနပ်စရာကောင်းတာလေး တခုကတော့ မိခင်ကျောင်းတော်ကြီးနဲ့ ဆရာများကို စာနဲ့ ကန်တော့ပန်းဆင်နိုင်တာ ဖြစ်တယ်။ စာရေးဆရာဖြစ်ရတာ ဒီအချက်တချက်နဲ့ပဲ ကျေနပ်စရာ ကောင်းနေပါပြီ။စေတနာရိုက်ကျွန်တော်တို့ခေတ် ကျောင်းသားတိုင်းမှာ 'မိခင်ကျောင်းတော်'ဆိုတဲ့ အစွဲအလမ်း အင်မတန် ကြီးကြပါတယ်။ ကိုယ့်ကျောင်းကိုယ် သိပ်ပြီး ချစ်ကြ၊ ဂုဏ်ယူကြတယ်။ ဆရာတွေကိုလည်း ချစ်ခင်လေးစားမှု ရှိကြတယ်။ရိုက်လည်း ချစ်ကြတာပဲ။ အသက်ကြီးလာတဲ့အခါဆိုရင် အရိုက်သန်တဲ့ဆရာကို ပိုပြီးတောင် သတိရ တမ်းတလေ့ရှိတယ်။ စေတနာရိုက် ဖြစ်တာကိုး။အခုခေတ်လို ကျူရှင်ဆရာဆိုတာလည်း မရှိဘူးလေ။ စာသိပ်အားနည်းတဲ့ ကျောင်းသားဆိုရင် ဆရာတွေက စာမေးပွဲနီးတဲ့အခါ အိမ်ခေါ်ပြီး သင်ပေးလေ့ရှိတယ်။ ဘာ ကျူရှင်ခမှ ယူတာ မဟုတ်တဲ့အပြင် မုန့်ချိန်တန်မုန့်၊ ထမင်းချိန်တန် ထမင်းကျွေးပြီး သင်ကြတာ။စေတနာဆရာနဲ့ ကျူရှင်ဆရာနယ်က ဆရာ၊ ဆရာမတွေဆိုရင် ကျောင်းနဲ့သုံးလေးမိုင်ဝေးတဲ့ ရွာတွေက လာတက်ရတဲ့ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားတွေကို စာမေးပွဲနီးတဲ့အခါ တလကိုးသီတင်းကို အိမ်မှာ ညအိပ်ညနေ ခေါ်ထားပြီး သင်ပေးကြတယ်။ ကျူရှင်ခတို့၊ ထမင်းဖိုးတို့ယူ တာ မဟုတ်ဘူး။ အဲဒီတော့ ကျောင်းသားတွေက မချစ်ဘဲ၊ မလေးစားဘဲ ဘယ်နေတော့မှာလဲ။ ကျောင်းသား တင်မကဘူး။ ကျောင်းသားမိဘတွေကပါ ချစ်ခင် ကြည်ညိုကြတယ်။အခုခေတ်ရောက်တော့ မြို့တကာ နယ်တကာမှာ ကျူရှင်တွေ ခေတ်စားလာကြတယ်။ ကျောင်းသားတွေက ကျောင်းထက် ကျူရှင်ကိုပိုပြီး အားကိုးကြတယ်။ ဒီတော့ ကျောင်းချစ်စိတ်၊ ဆရာချစ်စိတ်တွေ လျော့နည်းသွားတယ်။ ကျောင်းသားရဲ့အိမ်ကို ဆရာခေါ်ပြီး ဝိုင်းလုပ်သင်တဲ့ခေတ် ရောက်လာတော့ ဆရာအပေါ်မှာ လုံးဝ အရိုသေ တန်သွားတော့တယ်။ကျူရှင်က ဖျက်ဆီးလိုက်တာကျောင်းသားက ဆရာကို မကြိုက်ရင် ဖြုတ်ပစ်ပြီး ချက်ချင်း နောက်တယောက် ငှားတယ်။ အဲဒီတော့ ဆရာက ကျောင်းသားကို မျက်နှာချိုသွေးပြီး ချော့သင်ရတယ်။ ကျောင်းသားတင် မဟုတ်သေးဘူး။ ကျောင်းသား အဖေကိုပါ မျက်နှာချိုသွေးရတာ။ အဲဒီလို ဆရာမျိုးတွေ များသထက်များလာတော့ ကျောင်းသားတွေက ဆရာကို ရိုသေလေးစားတဲ့စိတ် ဘယ်လိုလုပ် ရှိတော့မှာလဲ။ကျူရှင်တွေ ခေတ်စားလာကတည်းက ကျောင်းသူ ကျောင်းသားတွေမှာ ကျောင်းချစ်စိတ်၊ ဆရာချစ်စိတ် ကွယ်ပျောက်သွားရတာ ဖြစ်တယ်။ 'မိခင်ကျောင်းတော်' ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းမျိုး ဒီခေတ် ကျောင်းသားတွေကြားမှာ မရှိတော့ဘူး။ မြန်မာလိုရော၊ အင်္ဂလိပ်လို အသုံးပါ ပျောက်ကွယ်သွားပြီ။ ဒီခေတ် ဘွဲ့ရတဲ့အရွယ် အများစုဟာ 'Alma Mata' ဆိုတဲ့စကား ကြားတောင် မကြားဖူးကြတော့ဘူး။ အားလုံးကို ကျူရှင်က ဖျက်ဆီးပစ်လိုက်တယ်။အမေလို ဆရာမကြီးတွေကျွန်တော်တို့တုန်းကတော့ နည်းနည်းပဲရှိတဲ့ မြန်မာလူမျိုး ဆရာ၊ ဆရာမတွေ မဆိုထားနဲ့ အမြဲတမ်း အိနြေ္ဒ သိက္ခာကြီးတွေနဲ့ နေလေ့ရှိပြီး ပြုံးခဲ၊ ရယ်ခဲတဲ့ မျက်နှာဖြူ ဖာသာကြီးတွေနဲ့ ဘရာသာတွေကိုတောင် ချစ်ခင်လေးစားကြတယ်။ ဒီနေ့အထိ အမှတ်ရနေဆဲ ဖြစ်တယ်။ငယ်ငယ် ကလေးဘဝက သင်ခဲ့ရတဲ့ ဆရာမကြီး ဒေါ်လှရင်၊ ဆရာမကြီး ဒေါ်လှမေနဲ့ တီချာရို့စ်မေရီတို့ဆိုရင် အမေလိုကို ချစ်ခင်ခဲ့ကြတာ ဖြစ်တယ်။ အလယ်တန်းတွေမှာ သင်ခဲ့ရတဲ့ ဆရာ ဦးထင်ပေါ်၊ ဆရာဦးတင်ဦး၊ ဆရာ စိန်၊ ဆရာဝီ၊ ဆရာဦးအောင်စိန်၊ ဆရာဦးမြင့်ထွန်း၊ ဆရာဦးမြသောင်း တို့ဆိုရင်လည်း တဦးချင်းစီရဲ့ ထူးခြားချက်ကလေးတွေကို ဒီအသက်အရွယ် ရောက်တဲ့ထိ မှတ်မိနေပါသေးတယ်။နိဗ္ဗာန်ဆော်တွေဒီလို မှတ်မိနေတဲ့ ကျေးဇူးတရားတွေကို တနှစ်တကြိမ် ကျင်းပတဲ့ ဆရာကန်တော့ပွဲတွေက ပြန်လည် ဆန်းသစ်အောင် နှိုးဆော်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် အင်မတန် မွန်မြတ်လှပါတယ်။ ကမကထပြု ဆော်သြကြသူတွေဟာလည်း ကျေးဇူးတင်ထိုက်သူတွေ ဖြစ်တယ်။ တပည့်တွေကို ကျေးဇူးတရား မမေ့ကြဖို့ နှိုးဆော်ပေးတဲ့ နိဗ္ဗာန်ဆော်တွေ ဖြစ်သလို၊ ဘဝရဲ့ နောက်ဆုံးဆည်းဆာချိန်ကို ရောက်ရှိနေကြပြီဖြစ်တဲ့ ဆရာကြီး၊ ဆရာမ ကြီးတွေကို ပီတိဆိုတဲ့ အသက်ရှည်ဆေး တိုက်ကျွေးပေးတဲ့ သမားတော်တွေလို့လည်း ဆိုနိုင်ပါတယ်။ချမ်းသာမှုဆိုတာစိတ်၏ ချမ်းသာခြင်းသည်သာ အစစ်အမှန်ဆုံး ချမ်းသာခြင်း ဖြစ်တယ်။ မိမိရဲ့ ဆောင်ရွက်မှုလေးတခုကြောင့် လူတဖက်သား ပျော်ရွှင်ကြည်နူးနေတာကို မြင်ရတဲ့အခါ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ရင်တွင်းက ပျော်ရွှင်ကြည်နူးမှုဟာ ဘယ်လိုမှ ရေးပြလို့ မရနိုင်တဲ့ ချမ်းသာပီတိ ဖြစ်တယ်။ တခြား နိုင်ငံသားတွေ ခံစားဖူးချင်မှ ခံစားဖူးလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဆရာ၊ ဆရာမဟောင်းကြီးတွေကို ခေါင်းဖြူထိပ်ပြောင် တပည့်ဟောင်းကြီးတွေက မြေမှာဝပ်စင်းပြီး ဦးခိုက်ပူဇော်တာမျိုးက ကမ္ဘာမှာ မြန်မာနိုင်ငံ တခုတည်းသာရှိလို့ ဖြစ်တယ်။ သူများနိုင်ငံတွေမှာက 'ဆရာများနေ့' ရောက်တဲ့အခါ ပို့စ်ကဒ်လေးပို့တာလောက်သာ ရှိတတ်ကြတာ ဖြစ်တယ်။ အဲဒါကြောင့်လည်း မြန်မာပြည်မှာ လူလာဖြစ်ရတာကို ဝမ်းသာတယ်။ ပီတိကို မျှဝေပေးကြသူများကိုလည်း ကျေးဇူးတင်တယ်။လူထုစိန်ဝင်း
နိုင်ငံရေးမလုပ်တဲ့သဘော မဟုတ်ဘူးဒီလို မယူဆတာက နိုင်ငံရေးကို စိတ်မဝင်စားလို့ မဟုတ်ဘူး။ မနှစ်သက်လို့လည်း မဟုတ်ဘူး။ နိုင်ငံရေးနဲ့ လုံးဝ ကင်းကင်းရှင်းရှင်း နေလို့လည်း မဟုတ်ဘူး။ သတင်းစာ အလုပ် လုပ်ရင်းနဲ့ နိုင်ငံရေး သတင်းတွေရေးသလို သုံးသပ် ဝေဖန်ချက်၊ ထင်မြင် ယူဆချက်တွေလည်း ရေးခဲ့တယ်။ နိုင်ငံရေးသမားမျိုးစုံနဲ့လည်း ထိတွေ့ ဆက်ဆံခဲ့တယ်။ နိုင်ငံရေး ပါတီတခုထဲ ပါဝင်ပြီး အချိန်ပြည့် နိုင်ငံရေးလုပ်သူ မဟုတ်တာကြောင့် နိုင်ငံရေးသမား မဟုတ်ဘူးလို့ ယူဆထားတာ ဖြစ်တယ်။ လုံးဝ နိုင်ငံရေး မလုပ်ဘူးဆိုတဲ့သဘော မဟုတ်ပါဘူး။လှေခါးထမ်း ကော်ပုံးဆွဲတကယ်ကတော့ အရွယ်မရောက်မီကတည်းက နိုင်ငံရေး လုပ်ခဲ့တာပါ။ ကောလိပ်ရောက်တော့ အသက် ၁၆ နှစ် ပြည့်ခါစပဲ ရှိပါသေးတယ်။ မဲပေးနိုင်တဲ့အရွယ် မရောက်သေးပါဘူး။ အဲဒီခေတ်က အစဉ်အလာတိုင်း ကောလိပ်ရောက်တာနဲ့ တပ်ဦး အဖွဲ့ဝင် တန်းဖြစ်သွားပြီး လှေခါးထမ်း ကော်ပုံးဆွဲ အလုပ်တွေ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ သတင်းစာတိုက်ရောက်တော့လည်း တကသ ရွေးကောက်ပွဲ သတင်းတွေ ရေးလိုက်၊ ဖဆပလ၊ ပမညတ ဌာနချုပ်တွေသွားလိုက်နဲ့ နိုင်ငံရေးကိစ္စတွေနဲ့ ထွေးလုံး ရစ်ပတ် ဖြစ်နေခဲ့ရတယ်။ ကျောင်းနေဖက်တွေ ပမညတထဲ ရောက်သူရောက်၊ ဖဆပလထဲ ရောက်သူရောက်၊ ဗကပဖြစ်သူဖြစ်၊ အလံနီဖြစ်သူဖြစ် နောက်ဆုံး မဆလဖြစ်သူတွေ ဖြစ်သွားခဲ့ကြပေမယ့် ကိုယ်တိုင်ကတော့ ဘယ်ထဲမှ ရောက်မသွားခဲ့ဘူး။ စာနယ်ဇင်းလောကထဲမှာပဲ ရှိနေခဲ့တယ်။နိုင်ငံဝန် ထမ်းတာချင်းအတူတူပါတီဆိုင်းဘုတ်တခုအောက် ရောက်သွားပြီး အချိန်ပြည့် နိုင်ငံရေးသမား မဖြစ်ပေမယ့် ကိုယ့်ဟာကိုယ်တော့ နိုင်ငံရေး လုပ်နေတယ်လို့ပဲ ခံယူထားတယ်။ စာနယ်ဇင်း လုပ်ငန်းဆိုတာ၊ နိုင်ငံရဲ့လေးခုမြောက်မဏ္ဍိုင် မဟုတ်လား။ အုပ်ချုပ်ရေး၊ တရားစီရင်ရေး၊ ဥပဒေပြုရေးဆိုတဲ့ တခြားမဏ္ဍိုင်များနည်းတူ နိုင်ငံ့ဝန်ကို အတူတကွ ထမ်းဆောင်နေရတာပဲ ဖြစ်တယ်။ အဲဒါကြောင့် စာနယ်ဇင်းသမားဆိုတာလည်း အစိုးရအဖွဲ့ထဲက ဝန်ကြီး ဝန်ကလေးတွေလို၊ တရားလွှတ်တော်ချုပ်က တရားသူကြီးတွေလို၊ လွှတ်တော်ထဲက အမတ်တွေလို နိုင်ငံရေး လုပ်နေကြသူတွေပဲလို့ ယူဆတယ်။ ခေတ်အဆက်ဆက်မှာ နိုင်ငံရေးသမားတွေ ထောင်ထဲရောက်ကြသလို၊ စာနယ်ဇင်းသမားတွေလည်း ထောင်ထဲရောက်ကြရတာပါပဲ။ကိုယ်ပိုင်ယုံကြည်ချက်ဖြင့် အလုပ် လုပ်တတ်စေချင်အချိန်အခါ တခုက ကျောင်းဆရာ အလုပ်ကို နှစ်ပေါင်း နှစ်ဆယ်လောက် လုပ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒီကျောင်းဆရာ အလုပ် လုပ်တာလည်း နိုင်ငံရေးလုပ်တယ်လို့ သဘောထားပြီး လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ လူငယ်တွေကို ထမင်းစား ရေသောက် အင်္ဂလိပ်စကား တတ်ရုံလောက် သင်ပေးတာမဟုတ်ဘဲ မျက်စိပွင့် နားပွင့်ပြီး အရာရာကို ကိုယ်ပိုင် ဦးနှောက်နဲ့ ခွဲခြမ်း စိတ်ဖြာဝေဖန် သုံးသပ်တတ်အောင် ကူညီပေးတာ ဖြစ်တယ်။ဖော်ဂွတ်သွားသူတွေအဲဒီခေတ် အင်္ဂလိပ် စကားပြော သင်တန်းလာတက်လာသူ အများစုက နိုင်ငံရပ်ခြား တိုင်းပြည် အသီးသီးကို အပြီးတိုင် ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ဖို့ (Far good) သွားရောက်ကြမယ့်သူတွေ များတယ်။ အခုခေတ်လို ကျောင်းတက်ဖို့၊ အလုပ်လုပ်ဖို့ ပတ်စပို့ ထုတ်ပေးလေ့ မရှိပါဘူး။ အဲဒီလို အပြီးအပိုင်သွားကြမယ့်သူတွေကို မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့အချက်တွေ အသေးစိတ်ပြောပြပြီး "Home Sweet Home" ကိုယ့်အိမ်ကိုယ့်ယာထက် ကောင်းတဲ့နေရာ၊ ဘယ်မှာမှမရှိဆိုတဲ့ကဗျာကို တသုတ်ပြီး တသုတ် အဆက်မပြတ် သင်ကြားပေးခဲ့တယ်။ သူတို့ နိုင်ငံခြားထွက်တဲ့အခါမှာလည်း "Home Sweet Home" ဆိုတဲ့ ကောက်ရိုး ပန်းချီကားကို လက်ဆောင်ပေးလေ့ရှိတယ်။ တချို့တပည့်တွေရဲ့အိမ်မှာ အခုချိန်ထိ အဲဒီ ပန်းချီကားလေးတွေ ချိတ်ဆွဲထားကြတာကို သူတို့က ဂုဏ်ယူစွာနဲ့ ဓာတ်ပုံ ရိုက်ပို့ကြတယ်။ အဝေးရောက်နေကြပေမယ့် မြန်မာပြည်ကို မမေ့ကြသေးပါလားဆိုပြီး ကြည်နူးပီတိ ဖြစ်ရတယ်။နိုင်ငံရေးသမားဆိုတာနိုင်ငံရေးလုပ်တယ်ဆိုတာ နိုင်ငံရေးပါတီဝင်မှ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြီး အမတ်လုပ်မှ မဟုတ်ပါဘူး။ အများအကျိုးဆောင်ချင်တဲ့ ပရဟိတစိတ် ရှိသူမှန်သမျှ ဘယ်နေရာ ရောက်ရောက်၊ ဘာအလုပ် လုပ်လုပ် နိုင်ငံရေးလုပ်လို့ ရပါတယ်။ စကားလုံး ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တွေ ပြောဖို့ မလိုပါဘူး။ လူနားလည်ရခက်တဲ့ ဝေါဟာရတွေ မသုံးဘဲနဲ့ နိုင်ငံအတွက်တို့၊ ပြည်သူအတွက်တို့ ဆိုတဲ့ စကားမျိုးတွေ မပြောဘဲနဲ့ အများအတွက် အလုပ်လုပ်တဲ့သူမျိုးကိုမှ နိုင်ငံရေးသမားကောင်းလို့ ခေါ်နိုင်တာ ဖြစ်တယ်။ သူတော်စင် သူတော်ကောင်း ကျွတ်တမ်းဝင်ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်များဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ရဟန္တာပဲလို့ ဘယ်တော့မှ ထုတ်ဖော်ပြောကြားလေ့ မရှိပါဘူး။ ကိုယ့်ဂုဏ်ကိုယ်ဖော် မသူတော် ဆိုတဲ့စကား အရှိသားမဟုတ်လား။ညံ့တဲ့စာရေးဆရာစာတွေ ပေတွေရေးတဲ့အခါမှာလည်း အချစ်ဆိုတာ ဒါမျိုးပါ။ ကျွန်တော်ဆိုလိုတဲ့ အချစ်ဆိုတာက ဒီလိုဟာမျိုး ဖြစ်ပါတယ်လို့ စာရေးဆရာက ရေးပြနေရင်၊ အဲဒီ စာရေးဆရာဟာ တော်တော်ညံ့တဲ့ စာရေးဆရာ ဖြစ်တယ်။ ကျွမ်းကျင်တဲ့ စာရေးဆရာဆိုရင် အချစ်ဆိုတဲ့ စကားလုံးတလုံးမှ မသုံးဘဲနဲ့ အချစ်အကြောင်း ပြောပြနိုင်ရမယ်။ ရှေးအခါက ဇာတ်သဘင် ပညာရှင်ကြီးများဟာ ခုခေတ်လို ပစ္စည်းကိရိယာတွေရဲ့ အကူအညီ မပါဘဲနဲ့ အဆိုအပြော အမူအရာတွေနဲ့တင် ဇာတ်ရုပ်မျိုးစုံကို ပီပြင်အောင် သရုပ်ဆောင် သွားနိုင်ကြတယ်။ ဇောတိက သူဌေးကြီးအဖြစ် သရုပ်ဆောင်ရတဲ့အခါမှာလည်း ဇာတ်သေတ္တာကြီးပေါ် ထိုင်ရင်းနဲ့ ပွဲကြည့် ပရိသတ်က သူဌေးကြီးအဖြစ် မြင်သွားအောင် သရုပ်ဖော်နိုင်ကြတယ်။ ခုခေတ်လို မော်တော်ကားကြီးတွေ၊ မော်တော်ဆိုင်ကယ်ကြီးတွေ ဇာတ်ခုံမှာတင်ပြီးပြစရာ မလိုပါဘူး။စံပြုအပ်တဲ့ ပန်းသာမစာအုဆင်းရဲသား ကာကဝလိယ အဖြစ် သရုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာလည်း တောင်ရှည်ပုဆိုးနဲ့ ဖဲအင်္ကျီလက်တို ဝတ်ပြီး အဆိုအပြောနဲ့ ဆင်းရဲသားသဏ္ဍာန်ထွက်အောင် သရုပ်ဆောင်သွားကြတယ်။ ခုခေတ်လို သရုပ်မှန်ဖြစ်ဖို့ ဆိုပြီး နံငယ်ပိုင်းနဲ့ စုတ်ပြတ် ဖာထေးထားတဲ့ အင်္ကျီဝတ်ပြီး သရုပ်ဆောင်ပြတာမျိုး မလုပ်ပါဘူး။ ခုခေတ်က ဝတ်တာ စားတာသာ ဆင်းရဲသားနဲ့ တူတာ၊ ပြောပုံဆိုပုံနဲ့ မျက်နှာပေးကတော့ ဆင်းရဲသား သရုပ်နည်းနည်းမှ မပေါ်ပါဘူး။ မှန်တာ ပြောရရင် ဒီခေတ်မှာ ဇာတ်ကောင်စရိုက် ပီပြင်အောင် ရေးနိုင်တဲ့ စာရေးဆရာ မရှိသလောက် ရှားတယ်လို့တောင် ဆိုနိုင်တယ်။ ရှေးက ဆရာသခင်ဘသောင်းရဲ့ ‘ပန်းသာမစာအု’ ဝတ္ထုကြီးဟာ နိုင်ငံခြားဝတ္ထုကို ဆီလျော်အောင် မြန်မာပြန်ထားတဲ့ဝတ္ထု ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဇာတ်ကောင်စရိုက်တွေ ပီပြင်လွန်းလို့ ဖတ်သူတိုင်းက မြန်မာဝတ္ထုလို့ပဲ မှတ်ထင်ခဲ့ကြရတယ်။ကြယ်နီ၊ အောင်စိုးတို့စာတွေအလားတူပဲ ကြယ်နီရဲ့ တံငါဝတ္ထုတွေထဲက ကိုဒေါင်းစိန် ဆိုရင်လည်း တကယ့်ကို တံငါလိုတွေး၊ တံငါလို ပြောပြီး၊ တံငါလိုပဲ ပြုမူတာကြောင့် ဒီနေ့အထိ တံငါဝတ္ထုတွေထဲမှာ တံခွန်စိုက်နေနိုင်ခဲ့တယ်။ အညာသား စာရေးဆရာ အောင်စိုးရဲ့ ညောင်ဦးနယ် တက်မရွာက အဘဖိုးစံရုံနဲ့ ရွာသူရွာသားတွေရဲ့ကုန်းခေါင်ခေါင် အညာဒေသက တောသူတောင်သားတွေရဲ့ စရိုက်တွေဟာလည်း ပီပြင်လွန်းတာကြောင့် ရှုမဝ ခေတ်အခါက နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေရဲ့ အသည်းစွဲလို့ဆိုကြရတဲ့ တင့်တယ်တို့ ဝတ္ထုတွေနဲ့အပြိုင် စာဖတ်ပရိသတ်က စွဲမက်ခဲ့ကြရတယ်။ဇာတ်ကောင်နဲ့ စရိုက်တခြားစီခုခေတ် ဝတ္ထုတွေ ဖတ်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ ဖတ်ပြီးစိတ်ပျက်ရတာပဲ များတယ်။ ကိုဒေါင်းစိန်တို့၊ ဖိုးစံရုံတို့လို ရင်ထဲမှ စွဲနေရစ်တာမျိုး မတွေ့ရဘူး။ ကျေးလက်က ဆင်းရဲသား လယ်သမား၊ ဒါမှမဟုတ် လယ်သူမလေးအကြောင်း ရေးတော့ရေးတာပဲ။ ဒါပေမယ့် ဇာတ်ကောင်နာမည်က စပြီး ကျေးလက် မဆန်တော့ဘူး။ မြို့က တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူ ကျောင်းသားတွေလို နာမည်ဆန်းဆန်းတွေဖြစ်ပြီး ပြောကြတဲ့စကားတွေကလည်း ကဗျာဆန်ဆန်နဲ့ ရုပ်ရှင်ထဲက စကားတွေလိုဖြစ်နေတော့ ဇာတ်ကောင်နဲ့ စရိုက်က ဘာမှကို မဆိုင်တော့ဘူး။ အဲဒီတော့ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ရင်ထဲ စွဲတော့မှာလဲ။ နောက်ပြီး ပိုဆိုးတာက အချစ် အချစ် ဆိုတဲ့ စကားလုံးတွေ ဘုံးဘောလအော ပါနေပေမယ့် တကယ့် အချစ်ဆိုတာ မတွေ့ရခြင်း ဖြစ်တယ်။ စကားအနေနဲ့သာ အချစ် အချစ်နဲ့ ဇာတ်ကောင်တွေက ပြောနေကြတာ၊ စာရေးဆရာ ကိုယ်တိုင် အချစ်ဆိုတာ ဘာမှန်းသိပုံမရဘူး။ဘယ်သူ နိုင်ငံရေးသမား စစ်စစ်လဲစာရေးဆရာက သူတို့သိပ်ဆင်းရဲကြပါတယ်လို့ တခွန်းမှဝင်မပြောဘဲနဲ့ ဆင်းရဲခြင်းအကြောင်းပေါ်အောင် ရေးနိုင်မှ အချစ်ဆိုတဲ့စကားလုံး တလုံးမှမပါဘဲနဲ့ အချစ်အကြောင်း ပေါ်အောင်ဖွဲ့နိုင်မှ စာရေးကောင်းလို့ သတ်မှတ်ပါတယ်။ အလားတူပါပဲ နိုင်ငံရေးလုပ်တဲ့နေရာမှာလည်း နိုင်ငံရေးစကားတွေ တခွန်းမှမပြောဘဲနဲ့ နိုင်ငံရေးလုပ်တတ်ဖို့ လိုပါတယ်။ အခု ခေတ်မှာ နိုင်ငံရေးသမားနာမည်ခံပြီး နိုင်ငံရေးမလုပ်ဘဲ ကိုယ့်အရေးကိုသာလုပ်တဲ့သူမျိုးရှိသလို နိုင်ငံရေးသမား နာမည်မခံပေမယ့် ကိုယ့်အရေးကို လစ်လျူရှုပြီး လူအများအရေး၊ နိုင်ငံအရေးကို လုပ်တဲ့သူမျိုးတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဘယ်သူဟာ နိုင်ငံရေးသမားစစ်စစ်လဲဆိုတာ ဘေးက အကဲခတ်ကြည့်လိုက်ရင် သိသာပါတယ်။လူထုစိန်ဝင်း
ထူးဆန်းသော အတိုက်အခံများ (၂)
ရည်မှန်းချက် ပျောက်နေတဲ့ အတိုက်အခံများပြည်တွင်းရော ပြည်ပရော ဒေါ်လာစားအတိုက်အခံများရော ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စား အတိုက်အခံများရော အဓိက လိုအပ်နေတာ တစ်ခု ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါက ရည်မှန်းချက် ပါ။ ရည်မှန်းချက်မရှိပဲ ဘယ်အလုပ်မှ ထိထိရောက်ရောက်အောင်မြင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်ကမ်း ဘယ်ဆီကို ဦးတည်ချက်မရှိပဲ ရွေ့လျှားနေတဲ့ ရွက်လှေတစ်စီးအတွက် ဘယ်အရပ်က တိုက်ခက်လာတဲ့ လေပဲဖြစ်ဖြစ် အကျိုးမပြုနိုင်ဘူး လို့ http://www.meepyatite.info/ မှာ ဖတ်ဖူးပါတယ်။ အတိုက်အခံတို့အနေနဲ့လည်း ကမ်းတစ်ခုခုကို ဦးတည် မသွားခဲ့လို ခုလို ဒီသံသရာ ပင်လယ်ထဲမှာ ဆက်ပြီးလည်နေမှာပါပဲ။ အစိုးရက အလံ ပြောင်းလိုက်ရင် အလံကို ဆန္ဒပြလိုက်၊ အစိုးရအလံပြောင်းမှ သတိရပြီး အရင်တုန်းက မသုံးဖူးခဲ့တဲ့ ၄၃ ခုနှစ်က သုံးခဲ့တဲ့ သုံးရောင်ခြယ် ဒေါင်းအလံကို ပြန်ကိုင်လိုက်၊ အစိုးရက တစ်ခုခု ထလုပ်မှ လိုက်ကန့်ကွက်လိုက်နဲ့ လေဖမ်း ဒန်းစီးနေသမျှ ကာလပတ်လုံးတော့ လက်ရှိအနေအထားကနေ ဘာမှတိုးတက်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီတော့ အတိုက်အခံတို့အားလုံးအနေနဲ့ တိကျတဲ့ ရည်မှန်းချက်တစ်ခုထားဖို့နဲ့ ရည်မှန်းချက်ကိုသာ အာရုံစိုက်လုပ်ဖို့ သတိပေးလိုပါတယ်။ အစိုးရတစ်ခု ထ လုပ်မှ လိုက်ကန့်ကွက်တဲ့အလုပ်ကတော့ အလုပ်အကိုင်ကြီးတစ်ခုအနေနဲ့ လုပ်ဖို့တောင်မလုပ်လိုပါဘူး။ အင်မတန်မှလည်း အသိဥာဏ်နိမ့်ပြီး ကလေးဆန်လွန်းပါတယ်။ခုမှ ထ ပြီး သုံးရောင်ခြယ်ဒေါင်းအလံလွှင့်တဲ့ ရည်မှန်းချက်ပျောက် အတိုက်အခံများအထူးသဖြင့် နိုင်ငံခြားရောက် အတိုက်အခံတွေရဲ့ သံရုံးရှေ့တွေမှာ တောင်အော်မြောက်အော် အော်နေတာတွေ၊ ဓတ်ပုံတွေ မီးရှို့ပြ၊ နင်းပြတာတွေ လုပ်မယ့်အစား ပြည်တွင်းကို သွားပြီး အစိုးရကို တန်ပြန်တိုက်ခိုက်သင့်ပါတယ်။ ထောင်ကျမှာကြောက်ရင်လည်း တရားဝင် နည်းလမ်းနဲ့ အစိုးရကို ယှဉ်ပြိုင်မယ့် ပါတီတွေကို ကူညီပေးပါ။ အခုလို့ သံရုံးရှေ့မှာ ပါးစပ်ထဲရှိသမျှ လျှောက်အော်နေတာဟာ ပြည်တွင်းက အတိုက်အခံတွေအတွက် ဟာသတစ်ခု ဖြစ်စေသလို စိတ်ပျက်စရာတစ်ခုလည်း ဖြစ်စေပါတယ်။ ဒီတော့ ပြည်ပအတိုက်အခံအားလုံး အမြင်မှန်ရဖို့အချိန်တန်ပါပြီ။ အဲ့ဒီအလုပ်တွေကို ဘယ်သူမှ နားလည်ပေးလို့မရသလို ဘယ်သူမှလည်း မထောက်ခံပါဘူး။ သံရုံးရှေ့မှာ ဆန္ဒပြဖို့ ပြည်တွင်းက အစိုးရဆန့်ကျင်သူတွေဆီက ရံပုံငွေ (သို့မဟုတ်) အလှူငွေ ကောက်ခံကြည့်ပါ။ တစ်ပြားမှ ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီအဖြစ်အပျက်ကို ပြည်ပ အတိုက်အခံတို့လည်း သိပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့်လည်း မြန်မာအစိုးရနဲ့ မတည့်တဲ့ ပြည်ပ နိုင်ငံကြီးတွေကို ငိုပြပြီး ထောက်ပံ့ကြေးတွေ တောင်းနေကြတာပါ။ အကြောင်းသိတဲ့ မြန်မာတွေကတော့ ဘယ်တော့မှ မပေးပါဘူး။အလှူခံမထည့်တဲ့ မြန်မတွေအမြင်သာဆုံး မွတ်စလင်မ ဝေနှင်းပွင့်သုန် ကိုပဲကြည့်ပါ။ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အတွက် ပေ ၁၆၀ ကနေ စပရိန် ကြိုးနဲ့ခုန်ချဖို့ ဆိုပြီး ပိုက်ဆံတောင်းတာ မသိတဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့ သူတို့အချင်းချင်းတွေကလွဲပြီး ဘယ်သူကမှ မပေးပါဘူး။ သတင်းဌာနတွေနဲ့ ဘလော့တွေ ပြောတဲ့အတိုင်း၊ အတိုက်အခံတို့ အားလုံး လက်ခံထားတဲ့အတိုင်း ပြည်တွင်းမှာ အစိုးရ ကို တင်းမာနေတဲ့ ပြည်သူတွေ အများကြီးရှိတယ်၊ အစိုးရဆန့်ကျင်သူတွေကို အားပေးကြတာ တကယ်မှန်ရင် အဲ့ဒီထက် ရနိုင်ပါတယ်။ ခုတော့ မဖြစ်စလောက်နဲ့ ရှက်စရာကောင်းလွန်းပါတယ်။ ပြည်ပ မှာ ရှိတဲ့ မြန်မာ ၂ သိန်းကျော်မှာ အစိုးရကို အမြင်မကြည်တဲ့ သူ ၉၀ ရာခိုင်နှုံးရှိပါတယ်။ တစ်ယောက် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁ ဒေါ်လာပဲပေးအုံး ၂ သိန်း တော့ အသာလေး ရမှာပါ။ ခုတော့ နိုင်ငံခြားသားတွေရော အားလုံးပေါင်းမှ ပေါင် တစ်သောင်းတောင် မပြည့်ပါဘူး။ ဒါကို ဝေနှင်းပွင့်သုန် တို့ကိုယ်တိုင်လည်းသိပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း မြန်မာလို ကြော်ငြာပြီး အလှူမခံရဲတာပါ။ မယုံရင် မြန်မာလို ကြော်ငြာပြီး တစ်ယောက်လောက် ထပ်ပြီး ခုန်ချကြည့်ပါ။ ပိုဆိုးပါလိမ့်မယ်။မြန်မာလူမျိုးထက် သမိုင်းကတည်းက အမြဲ သွေးကြောင်ခဲ့တဲ့ ထိုင်းတွေတောင် သွေးဖောက်ပြီး ဆန္ဒပြရဲသေးတယ်။ မြန်မာအတိုက်အခံတွေကတော့ သွေးဖောက်ဖို့မပြောနဲ့ ရာသီဥတု နဲနဲဆိုးတာနဲ့ အလံတွေသိမ်းပြီး ပြန်တော့တာပဲ။ မြန်မာအတိုက်အခံတို့အနေနဲ့ ပေါချာချာ ခုန်ချမယ့်အစား သွေးဖောက်ရင်တော့ ပြည်သူအားလုံးသာမကျ ကျွန်တော်ပါ လေးစားမိမှာပါ။ဝေနှင်းပွင့်သုန်ဝေနှင်းပွင့်သုန်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အတိုက်အခံဘလော့ပေါင်းများစွာက အလွန်အမင်း ချီးကျူးထားကြပါသေးတယ်။ တစ်ချို့က ဒုတိယ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လို့တောင် ကင်ပွန်းတပ်ခဲ့ကြပါသေးတယ်။ တစ်ခါလောက် အဓိပ္ပါယ်မရှိခုန်ချ လိုက်တာနဲ့ ဘာမှမလေ့လာပဲ ချီးကျူးကြတာပါ။ ဒါကလည်း ဒေါ်လာစား ဘလော့တွေ၊ ဒေါ်လာစား facebook တွေနဲ့ ဒေါ်လာစား gmail တွေရဲ့ အစဉ်အလာပါပဲ။ဦးမြအေးမွေးနေ့ မွတ်စလင်များသာ လာရောက်ကမ္ဘာ့မြေပုံကို မွတ်စလင် ဝါဒတစ်ခုလုံးက ဖုံးလွမ်းရမည့် သင်္ကေတ ပုံနှင့် ညဖက်ထောင့် အောက်ခြေရှိ မြန်မာမြေပုံဝေနှင်းပွင့်သုန် ဆိုတာ ဘယ်သူလဲ၊ နိုင်ငံအတွက် ဘာတွေလုပ်ခဲ့ပြီးပြီလဲ? ခု ဘာတွေလုပ်နေလဲ? နောက်ဘာတွေလုပ်မှာလဲ? စတဲ့ မေးခွန်းတွေကို တစ်ယောက်မှ စိတ်မဝင်စားခဲ့ကြပါဘူး။ အမှန်တော့ ဝေနှင်းပွင့်သုန်ဆိုတာ မွတ်စလင် ဦးမြအေးရဲ့ သမီးပါ။ ယူကေမှာ တရားဝင်နေခွင့်ရဖို့အတွက် မွတ်စလင် တွေနဲ့ ပေါင်းပြီး နိုင်ငံရေးခိုလုံခဲ့တာပါ။ နောက်ပိုင်းမှာ ဘားမားကန်ပိန်း ယူကေ ရဲ့ ဒါရိုက်တာ Mark Farmaner နဲ့ တွေ့ပြီး ငြိစွန်းခဲ့ရာကနေ နိုင်ငံရေးလောကထဲကို စရောက်လာတာပါ။ Mark Farmaner ဆိုတာကလည်း ပထမ ဇိုးရဖန် (ဖရိုမန်းရှားရဲ့ သမီး) ကို ဘားမားယူကေ ကန်ပိန်း မှာ နေရာအပြည့်ပေးထားတာပါ။ ခုလည်း ဇိုးရဖန်က Mark Farmaner ရဲ့ ကိုယ်ဝန် ကို လွယ်ထားရပါတယ်။ ဝေနှင်းပွင့်သုန် က တော့ Mark Farmaner ရဲ့ ဒုတိယမြောက် မြန်မာ မိန်းမ ပါ။ မွတ်စလင်တွေနဲ့အတူနေ၊ အင်္ဂလန်တွေနဲ့ အတူနေပြီး ခုမှ အင်္ဂလိပ်စာ ကောင်းကောင်းပြောတတ်လို့ သူ့အဖေအရှိန်နဲ့ နေရာဝင်ယူနေတာပါ။ သူ့အဖေအရှိန်ဆိုပေမယ့်လည်း သူ့အဖေက နိုင်ငံအတွက် ဘာဆိုဘာတစ်ခုမှ မလုပ်ခဲ့ပါဘူး။ ပြစရာလည်း မရှိပါဘူး။ .တစ်ချိန်က ရှေ့ဆုံးမှာ နေရာရခဲ့ပေမယ့် ခု ဘေးဆုံးရောက်သွားတဲ့ ဖရိုမန်းရှားသမီး ကိုယ်ဝန်အရင့်အမာနှင့် ဇိုးရဖန်ဇိုးရဖန် ကိုရော ဝေနှင်းပွင့်သုန် ကိုပါ အပိုင်ရလိုက်သည့် Mark Farmaner ပါ။ အီးမေး က mark.farmaner@burmacampaign.org.uk ပါ ဖုန်းနံပါတ်က 447941239640 ပါ။ တခြား Mark Farmaner နှင့် ဇိုးရဖန်၊ Mark Farmaner နှင့် ဝေနှင်းပွင့်သုန် အတူတွဲပုံတွေကိုတော့ မမြင်သင့်တာတွေပါလို့ တင်မပေးတော့ပါဘူး။ စိတ်ဝင်စားရင်တော့ ဆက်သွယ်ပါ။ဖလန်းဖလန်းထနေသော ဝေနှင်းပွင့်သုန် နှင့် အချင်းချင်းနားလည်မှု အရည်မရ အဖက်မရအလုပ်နှင့် လုပ်ဇတ် အမေးအဖြေ။ Myanmar Express
ပေးစာ - ၃
မြန်မာ့နိုင်ငံရေးကို အစိုးရရဲ့ ဆန့်ကျင်ဖက်ကနေ နိုင်ငံရေးလုပ်နေသူတွေရဲ့ ၈၀ ရာခိုင်နှုံးက အဓိကပစ်မှတ် မှားနေပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ပြည်ပကနေ နိုင်ငံရေးလုပ်နေသူအားလုံးနီးပါးက မယောင်ရာကို ဆီလူးနေကြတုန်းပါပဲ။ အဲ့ဒီ တလွဲဆံပင် ကောင်းမှုတွေကြောင့် နှစ်ပေါင်းများစွာ ကျရှုံးမြဲ ကျရှုံးနေရတာပါ။ ပစ်မှတ် အစစ်အမှန်ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံရေး သမားတွေရဲ့ အဓိက ပစ်မှတ် အမှန်က ပြည်သူတွေပါ။ ပြည်သူတွေကို အကျိုးပြုဖို့နဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ အနာဂါတ်ကို အကောင်းဆုံးဖန်တီးဖို့ပါ။ ဒါပေမယ့် လက်တလော နိုင်ငံရေး လုပ်ဆောင်နေသူတွေအားလုံးနီးပါးက ပြည်သူကို ပစ်မှတ်ထားရမယ့် အစား လက်ရှိအစိုးရကို ပစ်မှတ်ထားနေကြပါတယ်။ လက်ရှိအစိုးရကို မကောင်းပြောဖို့၊ လက်ရှိအစိုးရကို အပြစ်တင်ဖို့ ကို အတင်း အဓမ္မ လုပ်ဆောင်ဖို့ ကြိုးစားရင်း ပြည်သူတွေကို ရင်းနှီးမြုပ်နှံနေကြပါတယ်။ အစိုးရဆိုတဲ့ ပစ်မှတ်ကို နေရာပေါင်းစုံက တိုက်ခိုက်ဖို့ ချောင်းမြောင်းရင်း ပြည်သူ ဆိုတဲ့ ပေါ်တာတွေကို ရှေ့ကနေ လွှတ်နေကြပါတယ်။ သူတို့တွေကမှ ပြည်သူကို ပေါ်တာဆွဲသူ အစစ်အမှန်၊ အကြမ်းဖက်သူအစစ်အမှန်၊ နိုင်ငံပြိုကွဲဖို့ လုပ်ဆောင်သူ အစစ်အမှန်တွေ ဖြစ်နေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ သမိုင်းမှာ အလားတူဖြစ်စဉ်ပေါင်းများစွာ ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တိုင်းရဲ့ အဆုံးမှာလည်း ဘာမှတိုးတက်ပြောင်းလဲမှု တစ်ခုမှ ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်လည်း ဘယ်သူမှ သံဝေဂ မရခဲ့ကြတဲ့အပြင် နောက်တစ်ကြိမ်မှားဖို့ ကြိုးစားနေကြပါတယ်။အမှန်တကယ် ပြည်သူလူထု အတွက် နိုင်ငံရေးလုပ်ဆောင်နေတဲ့သူတွေဆိုတာ ကျွန်တော်တို့လို ပြည်တွင်းကနေ နိုင်ငံရေးလောကမှ နေရာတစ်နေရာရဖို့နဲ့ ပြည်သူလူထုအတွက် အကျိုးဆောင်ခွင့် တစ်နေရာရဖို့ ကြိုးစားနေသူတွေပါ။ တကယ်ဖြစ်ချင်ရင် တကယ်လုပ်ယူမှရမှာပါ။ ကျွန်တော်တို့တွေ ပေးပါ ပေးပါ ဆိုပြီး အကြိမ်ကြိမ် တောင်းယူခဲ့ဖူးပါတယ်။ အကြိမ်ကြိမ်ရှုံ့ချခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဂျပန်စက္ကူ ၁၀ ထုတ်ကျော်အောင် ကြေငြာချက်ပေါင်းများစွာကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘာထူးခြားလာပါသလဲ? အားလုံးသိပါတယ်။ ဘာမှမထူးခြားလာပါဘူး။ အခုချိန်ဟာ ပြည်သူလူထုအတွက် အမှန်တကယ် နိုင်ငံရေးလုပ်ချင်သူတွေအတွက် အခွင့်အရေးကောင်းတွေ ရှိနေတဲ့ အချိန်ပါ။ ခုချိန်မှာ နိုင်ငံရေးလုပ်ခွင့်ရလို့ ကျွန်တော့ကိုယ် ကျွန်တော်လည်း ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ အမှန်တကယ်လည်း ပြည်သူ့အတွက်လုပ်နေရတယ်ဆိုတဲ့ စိတ်မွေးထားလို့ ကြည်နူးရပါတယ်။ ဒါတွေကို ထောင်ထဲက လူတွေနဲ့ ပြည်ပက လူတွေကို နားလည်စေချင်ပါတယ်။ ရှက်လည်း ရှက်တတ်စေချင်ပါတယ်။ခုလိုနိုင်ငံအတွက် ပါတီပေါင်းများစွာ၊ လူမျိုးစုပေါင်းများစွာက အမတ်တွေရဖို့ ကြိုးကျိုးစားနေချိန်၊ မိမိတို့နှစ်သက်တဲ့ ခေါင်းဆောင်၊ အရည်အချင်းရှိတဲ့ ခေါင်းဆောင်အတွက် ပြည်သူတို့ အသည်းကြားက မဲတပြားရဖို့ လက်တွေ့ ကျိုးစားနေချိန်မှာ ပြည်ပက ဒို့အရေး ဒို့အရေး အော်နေသူတွေက ဘာတစ်ခုမှ ကူဖော်လောင်ဖက်မရပါဘူး။ ထောင်ကျနေတဲ့လူတွေကလည်း ဘာတစ်ခုမှ အကျိုးမပြုပါဘူး။ ပြည်ပကနေပြီး တန်းစီဓာတ်ပုံရိုက်၊ အလံတွေထောင်၊ အော်လန်တွေကိုင်ပြီး အစိုးရ မကောင်းကြောင်းတွေ ပြောနေလို့ ခုချိန်မှာ ဘာများအကျိုးထူးနိုင်မှာလဲ?ခုလောလောဆယ်မှာ ကျွန်တော်တို့က အလယ်မှာရှိနေပြီး ပြည်သူလူထုနဲ့ အစိုးရ က အစွန်းတစ်ဖက်ဆီမှာရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ ပြည်သူလူထုဖက်ကို ချဉ်းကပ်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားရပါမယ်။ ပြည်သူလူထုကို ကျောပေးပြီး အစိုးရဖက်ကိုလှည့်ပြီး အော်ချင်ရာအော်နေရင်တော့ ပြည်သူလူထုအတွက်လည်း အမှိုက်၊ အစိုးရအတွက်လည်း အမှိုက်ဖြစ်နေမှာပါ။ ဒီတော့ တကယ်နိုင်ငံရေးလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်၊ ပြည်သူကို တကယ်အကျိုးပြုချင်တယ်ဆိုရင် အစိုးရမဟုတ်တဲ့ ပါတီတစ်ခုခုကို ငွေအား ဒါမှမဟုတ် လူအားနဲ့ အကျိုးပြုဖို့ပဲ လုပ်ဆောင်ကြပါ။ အားမနာတမ်းဝေဖန်ရမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ တီရှပ် ဝတ်ပြီး ပန်းဖလက် ကိုင်ထားတဲ့ ခလေး တစ်ယောက်က ပြည်ပမှာ ဝတ်စုံအပြည့်၊ ခေါင်းပေါင်း၊ အလံနဲ့၊ အော်လံကိုင်ထားတဲ့လူထက် အဆပေါင်းများစွာ ပြည်သူကို အကျိုးပြုနေပါတယ်။ အစပေါင်းများစွာ တန်ဖိုးရှိပါတယ်။ ပြည်ပက နေ အဲ့လို အကျိုးမရှိတာတွေ လုပ်နေကြမယ့်အစား ပြည်တွင်းမှာ ငွေကြေးမပြည့်စုံတဲ့ ပါတီတွေကို ကူညီပေးပါ။ သူတို့တွေမှာ အခက်အခဲတွေ ရှိနေပါတယ်။ လက်ရှိအာဏာရှိနေတဲ့ ပါတီနဲ့ ယှုဉ်ပြိုင်ဖို့ ဘက်ပေါင်းဆုံးက လိုအပ်မှုတွေရှိနေပါတယ်။ အဲ့ဒါကို သိစေချင်ပါတယ်။ ပြည်ပ အတိုက်အခံအဖွဲ့ ကူညီထောက်ပံ့နေသူတွေ အနေနဲ့ကလည်း အဲ့လိုလူတွေကို ကူညီမယ့်အစား ပြည်တွင်းက အစိုးရကို တရားဝင်ယှဉ်ပြိုင်မယ့် တကယ်အလုပ်လုပ်တဲ့လူတွေကိုပဲ ကူညီပါ။ ပြည်ပက တန်စီဓာတ်ပုံရိုက်၊ ဒို့အရေးအော်နေသူတွေအနေနဲ့လည်း မိမိတို့ ရနေတဲ့ ငွေကြေးတွေကို တကယ်အလုပ်လုပ်နေသူတွေကို ခွဲပေးပါ။ အနှစ် ၂၀ ကျော် ပြည်ပမှာ တောင်အော်မြောက်အောင် လုပ်နေလို့ ဘာမှ တိုးတက်ပြောင်းလဲမလာဘူးဆိုတာကို လက်ခံပြီး တစ်ပတ်တောင် မလိုတော့တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် အစိုးရမဟုတ်တဲ့ ပါတီတွေကို ကူညီပေးပါ။ဒီလိုလုပ်နေတဲ့လူတွေထက်ဒီလူတွေတွေကပိုပြီးတန်ဖိုးရှိပါတယ်ပိုပြီး ကျက်သရေရှိပါတယ်ဂုဏ်ရှိပါတယ်ပိုပြီး သတ္တိရှိပါတယ်ပိုပြီး ပြည်သူကိုအကျိုးပြုပါတယ်ပိုပြီး ငြိမ်းချမ်းခြင်းကို ဦးတည်ပါတယ်ပိုပြီး ဒီမိုကရေစီကို ဦးတည်ပါတယ်အမြင်မှန်တွေ ရကြပါစေဦးမောင်ကို